မျိုးဗီဇပြု ပြင်ထားသည့် ခြင်တွေကို အသုံးပြုသင့်သလား? – Gentleman Magazine
မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားသည့် ခြင်တွေကို အသုံးပြုသင့်သလား?
ခြင်ဆိုတဲ့ အင်းဆက်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆိုးရွားဆုံးသတ္တ၀ါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်သေးပေမယ့် ကိုက်ရင်နာကျဉ်ရရုံတင်မကပါဘူး။ ငှက်ဖျားရောဂါ၊ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါတို့လို နှစ်စဉ်လူဦးရေ သိန်းဂဏန်းလောက်ကို ဇီဝိန်ချွေနေတဲ့ ရောဂါဆိုးတွေကိုလည်း ပျံ့နှံ့စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း ခြင်ပြဿနာကို ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လူတွေက နည်းလမ်းတွေကို ရှာဖွေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုအခါမှာတော့ ရောဂါဆိုးတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ခြင်တွေကို သုတ်သင်တားဆီးနိုင်မယ့် စီမံကိန်းတစ်ခုကို သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းမှာတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ မျိုးဗီဇပြုပြင်ပြောင်းလဲထားတဲ့ ခြင်တွေကို အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပထမနည်းလမ်းကတော့ မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားတဲ့ ခြင်ထီးတွေကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ခြင်မတွေနဲ့ သဘာဝအတိုင်း မိတ်လိုက်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမိတ်လိုက်ပေမယ့် ခြင်ထီးတွေမှာ ထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့ ပြုပြင်မျိုးဗီဇတွေကြောင့် ခြင်သားလောင်းတွေဟာ အရွယ်ရောက်တဲ့အထိ အသက်ရှင်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခုချိန်ထိတော့ ဒီနည်းလမ်းကို သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါ အဖြစ်များတဲ့ ဘရာဇီးလ်နိုင်နဲ့ Cayman Islands တို့မှာ စမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ရာမှာ ခြင်တွေပေါက်ဖွားနှုန်းကို (၉၅)ရာခိုင်နှုန်းအထိ ကျဆင်းသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ ခြင်တွေရဲ့အရေအတွက်များပြားလာတိုင်းမှာ မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားတဲ့ ခြင်တွေ ထပ်မံဖန်တီးနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်မျိုးဗီဇပြုပြင်နည်းပညာတစ်ခုကလည်း နောက်ထပ်ချဉ်းကပ်နည်းတစ်ခုအတွက် စဉ်းစားစရာဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်။ ဒီချဉ်းကပ်မှုမှာတော့ ခြင်မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို လုံးဝပြောင်းလဲသွားအောင် ဒါမှမဟုတ် ရှင်းထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီနည်းက မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို ရှင်းထုတ်ပစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် အခြားကြောက်စရာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီနည်းလမ်းမှာ Gene drive လို့ခေါ်တဲ့နည်းပညာကို အသုံးပြုပြီး မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားတဲ့ DNA ကို မျိုးစိတ်ထဲ ပျံ့နှံသွားအောင် လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးဗီဇပြုပြင်ထားတဲ့ DNAက နောက်ထပ်ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ခြင်မျိုးဆက်တွေကို ငှက်ဖျားရောဂါလို ရောဂါပိုးတွေကို မသယ်နိုင်အောင် ပြောင်းလဲပစ်နိုင်ဖို့ ယူဆထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမျိုးဗီဇပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိတာကြောင့် အခြားမလိုလားအပ်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် အားလုံးအခက်တွေကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဒုတိယနည်းလမ်းအတွက် မျိုးဗီဇပြုပြင်မှုမျိုးကို ယင်ကောင်တွေမှာ စမ်းသပ်နေပြီဖြစ်ပြီး မကြာခင်မှာ ခြင်တွေမှာပါ စမ်းသပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ငှက်ဖျားရောဂါကိုရှင်းထုတ်ပစ်နိုင်ရင် သန်းနဲ့ချီတဲ့လူသားတွေရဲ့အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခြင်တွေကို ရှင်းထုတ်လိုက်တာက အစာကွင်းဆက်က အခြားသတ္တ၀ါတွေကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မျိုးဗီဇပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်တာရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့အားလုံးက သေချာလေ့လာသိရှိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သင့်ကားရဲ့ ဆီစားသုံးမှုကို လျော့ချပေးမယ့် နည်းလမ်း ၁၀ ခု
မြိုးဗီဇပွုပွငျထားသညျ့ ခွငျတှကေို အသုံးပွုသငျ့သလား?
ခွငျဆိုတဲ့ အငျးဆကျဟာ ကမ်ဘာပျေါမှာ အဆိုးရှားဆုံးသတ်တဝါတဈမြိုးဖွဈပါတယျ။ အကောငျသေးပမေယျ့ ကိုကျရငျနာကဉျြရရုံတငျမကပါဘူး။ ငှကျဖြားရောဂါ၊ သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါတို့လို နှဈစဉျလူဦးရေ သိနျးဂဏနျးလောကျကို ဇီဝိနျခြှနေတေဲ့ ရောဂါဆိုးတှကေိုလညျး ပြံ့နှံ့စနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့လညျး ခွငျပွဿနာကို ဖွရှေငျးနိုငျဖို့လူတှကေ နညျးလမျးတှကေို ရှာဖှနေကွေတာဖွဈပါတယျ။
အခုအခါမှာတော့ ရောဂါဆိုးတှကေို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့ ခွငျတှကေို သုတျသငျတားဆီးနိုငျမယျ့ စီမံကိနျးတဈခုကို သိပ်ပံပညာရှငျတှကေ ဆောငျရှကျနပွေီဖွဈပါတယျ။ ဒီစီမံကိနျးမှာတော့ သိပ်ပံပညာရှငျတှဟော မြိုးဗီဇပွုပွငျပွောငျးလဲထားတဲ့ ခွငျတှကေို အသုံးပွုသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ပထမနညျးလမျးကတော့ မြိုးဗီဇပွုပွငျထားတဲ့ ခွငျထီးတှကေို လှတျပေးလိုကျပွီး ခွငျမတှနေဲ့ သဘာဝအတိုငျး မိတျလိုကျစမှောဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုမိတျလိုကျပမေယျ့ ခွငျထီးတှမှော ထညျ့သှငျးပေးလိုကျတဲ့ ပွုပွငျမြိုးဗီဇတှကွေောငျ့ ခွငျသားလောငျးတှဟော အရှယျရောကျတဲ့အထိ အသကျရှငျနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ အခုခြိနျထိတော့ ဒီနညျးလမျးကို သှေးလှနျတုပျကှေးရောဂါ အဖွဈမြားတဲ့ ဘရာဇီးလျနိုငျနဲ့ Cayman Islands တို့မှာ စမျးသပျကွညျ့ခဲ့ရာမှာ ခွငျတှပေေါကျဖှားနှုနျးကို (၉၅)ရာခိုငျနှုနျးအထိ ကဆြငျးသှားတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒီခဉျြးကပျမှုရဲ့အားနညျးခကျြကတော့ ခွငျတှရေဲ့အရအေတှကျမြားပွားလာတိုငျးမှာ မြိုးဗီဇပွုပွငျထားတဲ့ ခွငျတှေ ထပျမံဖနျတီးနရေတာပဲဖွဈပါတယျ။
နောကျထပျမြိုးဗီဇပွုပွငျနညျးပညာတဈခုကလညျး နောကျထပျခဉျြးကပျနညျးတဈခုအတှကျ စဉျးစားစရာဖွဈလာစခေဲ့ပါတယျ။ ဒီခဉျြးကပျမှုမှာတော့ ခွငျမြိုးစိတျတဈခုလုံးကို လုံးဝပွောငျးလဲသှားအောငျ ဒါမှမဟုတျ ရှငျးထုတျပဈလိုကျဖို့ပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီနညျးက မြိုးစိတျတဈခုလုံးကို ရှငျးထုတျပဈတာဖွဈတဲ့အတှကျ အခွားကွောကျစရာဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှေ ရှိလာနိုငျပါတယျ။
ဒီနညျးလမျးမှာ Gene drive လို့ချေါတဲ့နညျးပညာကို အသုံးပွုပွီး မြိုးဗီဇပွုပွငျထားတဲ့ DNA ကို မြိုးစိတျထဲ ပြံ့နှံသှားအောငျ လုပျဆောငျမှာဖွဈပါတယျ။ မြိုးဗီဇပွုပွငျထားတဲ့ DNAက နောကျထပျပေါကျဖှားလာတဲ့ ခွငျမြိုးဆကျတှကေို ငှကျဖြားရောဂါလို ရောဂါပိုးတှကေို မသယျနိုငျအောငျ ပွောငျးလဲပဈနိုငျဖို့ ယူဆထားကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီမြိုးဗီဇပြံ့နှံ့မှုကို ထိနျးခြုပျဖို့နညျးလမျးမရှိတာကွောငျ့ အခွားမလိုလားအပျတဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှဖွေဈလာမယျဆိုရငျ အားလုံးအခကျတှကေုနျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒီလို ဒုတိယနညျးလမျးအတှကျ မြိုးဗီဇပွုပွငျမှုမြိုးကို ယငျကောငျတှမှော စမျးသပျနပွေီဖွဈပွီး မကွာခငျမှာ ခွငျတှမှောပါ စမျးသပျတော့မှာဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုနညျးလမျးတှနေဲ့ ငှကျဖြားရောဂါကိုရှငျးထုတျပဈနိုငျရငျ သနျးနဲ့ခြီတဲ့လူသားတှရေဲ့အသကျကို ကယျတငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ခွငျတှကေို ရှငျးထုတျလိုကျတာက အစာကှငျးဆကျက အခွားသတ်တဝါတှကေို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မြိုးဗီဇပွောငျးလဲမှုတှေ လုပျဆောငျတာရဲ့နောကျပိုငျးမှာ ဘယျလိုဘေးထှကျဆိုးကြိုးတှရှေိမလဲ ဆိုတာကိုတော့ ကြှနျတျောတို့အားလုံးက သခြောလလေ့ာသိရှိထားဖို့ လိုအပျပါတယျ။
သငျ့ကားရဲ့ ဆီစားသုံးမှုကို လြော့ခပြေးမယျ့ နညျးလမျး ၁၀ ခု
Previous: သင့်ကလေးကို သင်ကြားပေးသင့်တဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာ (၁၁) ခု
Next: Men Shirt